Hoos udhac ilaa 9 digrii ah ayaa lagafilayaa Spain | Saadaasha Shabakadda
Ku gudbaya kuleyl? Runta ayaa ah waxaan ku bilownay bilow aad uga diirran sidii caadiga ahayd, oo leh heerkul aad u sarreeya iyadoo la tixgelinayo bisha aan ku jirno: 43,1 digrii centigrade waxaa laga diiwaangeliyey Granada maalintii 6, 38'4ºC 5-tii Ibiza ama 45,4ºC garoonka Córdoba sidoo kale 5-tii.
Laakiin xaaladdan ayaa is beddeli doonta laga bilaabo maanta oo Jimce ah. Xaqiiqdii, heerkulka ayaa la filayaa inuu hoos ugu dhaco 9 digrii dhamaadka usbuuca, taas oo xaqiiqdii naga caawin doonta inaan dareemo sida dayrta ay u dhow dahay.
Modesto Sánchez, oo ah afhayeenka Wakaaladda Saadaasha Hawada ee Gobolka, ayaa sharraxay in inta lagu jiro Sabtida iyo Axadda aan ku noolaan doonnomacasalaameynta xagaaga», In kasta oo xaqiiqda ay tahay in maalinta ugu dambeysa ee usbuuca ay jiri doonto soo laabasho yar oo heer kulka ah.
Maalinta Talaadada 13, hoos u dhac guud ayaa la filayaa, iyo xasilooni daro ka dhalata jawiga taasoo noo reebi doonta roobab iyo cirka daruuro badan oo dalka ah, biyaha shaki la’aan in sifiican looga soo dhaweyn doono jaaliyadahaas ay si dhib yar roobka uga da'een, sida Catalonia, Balearic Islands, ama Madrid.
Kuwani waa saadaalinta AEMET maalmaha soo socda:
1 Saadaalinta Jimcaha, Sebtember 9
2 Saadaalinta Sabtida, Sebtember 10
3 Saadaalinta Axada, Sebtember 11
Saadaalinta Jimcaha, Sebtember 9
Maanta, muddooyinka daruuraha ah ee isbeddelka diurnal ayaa laga filayaa bariga saddexaad ee jasiiradda, iyadoo ay suuragal tahay roobab iyo duufaanno ka dhaca Catalonia, waqooyiga Aragon iyo koonfurta Nidaamka Iberian. Heerkulku wuu yaraan doonaa Pyrenees, qeybta koonfureed ee gacanka iyo Jasiiradaha Canary; inta hartayna wax yar bay kici doonaan.
Saadaalinta Sabtida, Sebtember 10
Maalinta Sabtida ayay arrimuhu bilaabmi doonaan inay dalka oo dhan is beddelaan. Cirka daruuraha leh ayaa laga filayaa in badan oo ka mid ah jasiiradda, iyo sidoo kale labada jasiirado. Waxay ka di’i kartaa waqooyiga Catalonia. Heerkulka ayaa hoos u dhici doona.
Saadaalinta Axada, Sebtember 11
Maalinta Axada daruuro ayaa laga filayaa waqooyiga Galicia iyo galbeedka Cantabrian Sea, sidoo kale Pyrenees, bariga seddexaad ee jasiiradda, iyo jasiiradaha Balearic, halkaas oo ay ku qabsan karaan. Jasiiradda inteeda kale inteeda kale cirku wuu ahaan doonaa mid nadiif ah ama daruuro sare leh. IYO jasiiradaha Canary waxay ku soo da'ayaan jasiiradaha gargaarka weyn.
Heerkulka ugu sarreeya wuxuu ku kordhi doonaa waqooyiga iyo bartamaha Peninsula, halka qeybta koonfureedna ay yaraan doonaan.
Marka, wax kayar baa jira oo macsalaameeya xagaaga 🙂.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » Ku shub illaa illaa 9 digrii si aad u joojiso kuleylka